Dr Abiy Axmed Ma Ku Guuleysan Doonaa Abaalmarinta Nabadda Ee Nobel? – somalilandtoday.com
(SLT-Addis Ababa)-Majalada Time ayaa sheegay shaqsiyaadka la filayo inay ku guulleystaan abaalmarinta nabadda ee Nobel oo sanadkan 2019-ka lagu qabanayo caasimadda Norway ee Oslo ayaa loo badinayaa inuu ka mid noqdo Ra’isalwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed.
Wargeyska ayaa u sababeeyey inuu Dr Abiy uu ku guulleysan karo abaalmarintaasi inta uu talada dalka Itoobiya qabtay sida uu muddo gaaban uu ugu soo afjaray colaaddi 20 sano ku dhawaad ka dhex taagneyd Itoobiya iyo Eritrea, maxaabiista siyaasadeed ee faraha badan oo uu xabsiyada ka si daayey iyo guud ahaan isbeddellada uu ka sameeyey siyaasadda dalkaasi.
Raysal wasaare Dr Abiy Axmed muddada kooban uu xilka soo hayey tallaabbooyin wax ku ool ah ayuu qaaday, haddana dadbaa ku dhaliilaya iney weli jiraan howla waxqabad u baahan oo Raisul wasaaraha horyaallo.
Tan iyo inta uu hoggaanka dalka Itoobiya uu qabtay Raysal wasaare Dr Abiy Axmed oo ay haatan hal sano u buuxsantay waxaa dalka Itoobiya ka socday isbeddello dhinacya badan taabanaya.
Raysal wasaaraha mar uu arrintaasi ka hadlayey waxaa uu yiri “Sarreynta sharciga howla aad u badan ayaa noo qabsoomay inkasta oo ay jiraan arrima qaarkood oo u baahan wakhti badan in la geliyo balse aanu billaawnay”
“Deegaankaasi wuxuu sameeystay 30,000 oo askari oo hubeysan haddii ay dowladda dhexe faregelin inta ay ku sameyso ay xukumaddi jirtay beddeli leheenna waxaaba dhici laheyd inuu deegaankaasi sawirka guud uu dalka Itoobiya leeyahay uu beddeli lahaa” ayuu yidhi.
“Dhulka dowladda ayaa iska leh qodob dastuuri ah ayaana si cad u dhigaya, marka su’aal kasta oo la xiriirto dhulka waxaan ku maareyneynaa si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federalka Itoobiya”, ayuu yidhi
Wuxuu intaasi ku daray inTigreega oo keli aysan ahayn deegaannada xurgufta kala dhexeysa dowladda dhexe waxaa ka mid ah buu yidhi Oromada, Benishaangul , iyo kuw kale.
“Waana ku faraxsanahay inuu maanta deegaan weliba wixii uu raba inuu nagu taageero wixi aan ku kala duwannahayna uu nagu khilaafo muddada sanadka ah fufurnaanta siyaasadeed ee aan dalka ka hirgelinnay ayuu ka mid yahay” ayuu yidhi.